Saadaasha Khabiirka BBC Sports Mark Lawrenson Ee Kulamada 29aad Ee Horyaalka Premier League – Liverpool Oo Hoggaanka Lagala Wareegi Doono Iyo Arsenal Oo Lumin Doonta Booska 4aad – Cadalool.com
Saadaasha Khabiirka BBC Sports Mark Lawrenson Ee Kulamada 29aad Ee Horyaalka Premier League – Liverpool Oo Hoggaanka Lagala Wareegi Doono Iyo Arsenal Oo Lumin Doonta Booska 4aad
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa kusii siqaya dhamaadka, waxaana uu gelayaa usbuucii 29aad oo naadiyadu ay isku haleeli doonaan.
Maalmaha Sabtida iyo Axadda ayaa ay kooxaha Ingiriisku kulamadooda usbuucan yeelan doonaan, waxaana ciyaarta ugu adag ku ballansan kooxaha reer London ee Tottenham iyo Arsenal, halka Liverpool ay deriskeeda cadaawadda weyn ka dhaxayso ee Everton ay jilbaha isku dhigan doonaan.
Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta, hal dhibicna ka dambaysa Liverpool ayaa imtixaan sahlan mari doonta, waxaanay u tegi doontaa Bournemout.
Haddaba sidii aynu uga baranay, khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson oo sameeyey saadaashiisii toddobaadlaha ahayd ee ka hor kulamada usbuuc walba, ayaa waxa uu soo saaray saadaasha kulamada 29aad, waxaana uu guulo ugu sii bushaareeyey kooxo halka uu kuwo kalena ka nixiyey.
Mark Lawrenson waxa uu saadaashiisa toddobaadkan ku sheegay in Liverpool ay si ramsi ah hoggaanka ugu wareejin doonto Man City, iyadoo barbarro la gelaysa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton oo ay ku wada ciyaarayaan Goodison Park.
Manchester City ayaa guul kala soo laaban doonta safarka ay ugu tegayso Bournemouth sida uu Mark Lawrenson saadaashiisa ku sheegay, balse Arsenal iyo Tottenham ayaa barbar-dhac geli doona.
Saadaasha khabiirka Mark Lawrenson oo dhamaystiran: